Soomaaliya, 05 February 2017
Khudbaddihii Musharaxiinta oo soo Dhammaaday
Qeybtii u danbeysay ee musharrixiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Somalia ayaa baarlamaanka Somalia u jeediyey khudbaddo ku aaddan barnaamijkooda siyaasadeed ee Somalia ku aadan.
Roobab ka Curtay Somaliland
Deegaanno ka mid ah Somaliland oo ay ka jireen abaarro aad u daran ayaa labadii maalmood ee la sooo dhaafay waxaa ka da’ayay roobab lagu diirasaday.
Xarunta Doorashada oo Afisyooni Loo Baddalay
Wararka ka imanaya magaalada Muqdishu ayaa sheegaya in la baddalay xarrunta lagu qabanayo doorashada madaxtinnimada Soomaaliya oo markii hore la qorsheeyay in ay ka dhacdo Akadamiyada Booliiska ee Muqdishu.
Doodda Murashaxiinta: Q. 2aad
Waa qeybtii labaad ee dood ay Idaacadda VOA u qabatey murashaxiinta xilka madaxtinimo ee Somalia, iyada oo qeyb saddexaadna aan dhawaan idiin soo gudbin doonno.
Madaxweynaha Soomaaiya Xasan Sheekh Maxmauud oo ah musharax mar kale u taagan xilka ayaa waraysi uu siiyay VOA-da waxa uu kaga hadlay waxayaabihii u suura gelin waayey in uu gaaro ballanqaadkiisii 2012-ka.
VOA oo Dood u Qabatay Qaar ka Mid Ah Musharaxiinta
Barnaamijkeenna Faaqidaadda Toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka iyo siyaasadda musharrixiinta u tartmaya madaxweynenimada Soomaaliya,.
Muqdisho: Banaanbax Lagu Taageeray Go'aankii ICJ
Bannaanbax lagu taageerayo go’aanka Maxkamadda Caalamiga ah ee Garsoorka ay shalay ku go’aamisay inay xaqu u leedahay qaadista dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa maanta ka dhacay Muqdisho.
Madaxweyne Xasan oo ka Hadlay Go'aankii ICJ
Maxkamada Cadaalada ee Caalamiga ah (ICJ) ee saldhigeedu yahay dalka Holland ayaa shaley galabti xilliga magaalada Den Haag soo bandhigtey go'aankeedi ku aaddana dacwaddii badda Soomaaliya ee mudaba laga war-dhowrayey.
ONLF oo Shirar Uga Qeyb Gashay Mareykanka
Waxa shalay galab daarta Cohen Building ee VOA ay ka deggan tahay magaalada Washington, D.C. nagu soo booqdey Cabdiraxmaan Mahdi, oo ah xog-haya arrimaha dibadda ee Jabhadda ONLF.
Maxkamadda ICJ oo Aqbashay Codsigii Soomaaliya
Garsoorayaasha maxkamadda ugu sareysa QM ayaa maanta xukmiyey inay sharci u leedahay inay qaado kiiska muranka dhinaca badda ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya.
QM oo ku Baaqday Gargaar Lala Gaaro Soomaaliya
Qaramada Midoobay ayaa arbacadii shaaca ka qaaday in haddii labada bilood ee soo socda Somalia lala gaari waayay kaalmo degdeg ah ay xaaladdu faraha ka sii bixi doonto, iyada oo ay imika jiraan abaaro aad u daran.
Musharaxiinta Madaxweyne oo Khudbado Jeediyey
Baarlamanka Soomaaliya ayaa maanta billaabay inuu dhageysto qaar ka tirsan musharrxiiinta u tartamaya doorashada xilka madaxweynaha oo lagu wado in toddobaadka dambe ay Soomaaliya ka dhacdo.